သင့်လုပ်ငန်းကို Digital Marketing နဲ့လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ? -
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးပေါ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွေနဲ့ Tools တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မြန်ဆန်ဖို့အတွက် ဘယ်နည်းပညာတွေနဲ့ Tools တွေကိုဘယ်လိုလေ့လာပြီး ဘယ်တစ်ခုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနည်းပညာတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကို လေ့လာနိုင်ရန်လက်ရှိမှာခေတ်စားလာတဲ့ Digital Marketing နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
၁. Video Marketing
၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာ Video Marketing အတွက် အကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာပိုတောင်ခေတ်စားလာပါသေးတယ်။၂၀၁၈ ခုနှစ်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထက်တောင် မှာ Video Marketing က ပိုမို ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ မိမိတို့ Product တွေကို Video Marketing ပြုလုပ်ပြီး Customer တွေဆီက Engagement ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Video Marketing ကရတဲ့ Internet Traffic ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မှာ ၈၀% အထိ တိုးလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့ စစ်တမ်းအရဆိုရင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၆၃% နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ၇၄% ရှိခဲ့ပါတယ်။ Video Marketing နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Post တွေကိုလည်း SEOMyanmar မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Customer Service တွေဆီက Reply ကိုအကြာကြီးစောင့်ဖို့ဆိုတာ Customer တွေအတွက် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Audience ပမာဏနဲ့ Customer Service အင်အား မမျှတလျှင် Reply ပြန်ခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Customer တိုင်းဆီကို Reply ပြန်နိုင်အောင်အတွက် AI စနစ်နဲ့ Bot တွေ ရှိလာပါပြီ။ ဒီ Bot တွေဟာ မိမိတို့လုပ်ငန်းရဲ့ Customer Service မှာအသုံးပြုတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ မေးခွန်းတွေကို သင့်တော်အောင်စီမံပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Chat Bot အမျိုးအစားတွေအမြောက်အများ ရှိပါတယ်၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Chatbot အမျိုးအစားတွေ ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Chatbot တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်လာခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာပိုမိုရင်းနီးလာပြီး Engagement တွေလဲ ပိုမိုရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
လူ့သဘာဝအရ လူတွေဟာ ပုံပြင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ၊ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ကို နှစ်သက်ကျပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ကုမ္ပဏီတွေဟာ Content ဖန်တီးရတာလွယ်ကူပြီး Audience Targeting လုပ်ရတာလဲ Digital Marketing နယ်ပယ်မှာ အရင်တုန်း ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာပါတယ်။ မိမိရဲ့ Brand ကို ကိုက်ညီမယ့် ပုံပြင်/ဇာတ်လမ်း တွေနဲ့ ဖန်တီးကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် Audience တွေရဲ့Engagement ကိုအမိအရ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ သေသေချာချာ ဖန်တီးကြော်ငြာခြင်းဖြင့် မိမိတို့ Brand ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
၄. Interactive Content
လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတုန်းက Digital Marketing နယ်ပယ်မှာ Content တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နဲ့သာရေးပြီးတင်ခဲ့ ကြော်ငြာခဲ့ကြပါတယ်။ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဖန်တီးမှုအသစ်လေးတွေနဲ့ ကြော်ငြာဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ Content တစ်ခုဟာ အရမ်းကိုငြီးငွေ့စရာကောင်း လွန်းနေရင် Audience တွေက Content ကိုဆုံးအောင်ဖတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒီတော့ Audience တွေ ကို စိတ်ဝင်စားမှုရလာစေရန် ဖန်တီးရပါမယ်။ Content တွေကို ပေးချင်တဲ့ Message တွေကြီးပဲမရေးပဲ မေးခွန်းလေးတွေပြန်မေးခြင်း၊ ဉာဏ်စမ်းလေးတွေမေးခြင်း၊ Poll လေးတွေလုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ Interactive Content လေးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ဖန်တီးရပါမယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ Audience တွေကို ဂရုစိုက်ရာကျတဲ့အတွက် Engagement ဟာအရင်ကနည်းလမ်းဟောင်းတွေထက် ပိုမိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ ယခုလက်ရှိမှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ Digital Marketing နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက Business အတော်များများမှာလည်းလက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့နည်း လမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Friday March 15th, 2019/ Blog/0Comment